SAWIRRO: Bajaajleeyda Muqdisho Booraar Yaableh dhagsaday&W-Amniga oo hadashay?
Dhawaan Magaalada Muqdisho waxaa mudooyinkii danbe aad loo hadal haayay Dumar Ragga Bajaajleeyda ku duraayo Cirbado Sun ah iyaga oo dhanka kale dhigay dibadbaxyo aay arintaasi ugu codsanayaan laamaha Amniga in aay wax ka qabtaan.
Bajaajleeyda oo cabasho Xooggan ka muujiyay Arintaasi wal wal baahsana ka qaba ayaa bilaabay in aay soo dhagsadaan Boorar aay ku qoran yahiin Walaal ha i durin middi ayaa ii saaran yey kugu fakan middida waxa rabto waan ka heshiineynaa iyo erayo kale oo cajiiba.
Wasaaradda amniga gudaha markii ay baaritaan ku sameysay iyada oo kaashaneysa hey’adaha u xilsaaran dabagalka iyo baaritaannada waxay ku ogaatay in arrimaha ku saabsan in gabdho Soomaaliyeed lagu soo ashkateeyay in ay CIRBADO sumeysan ku dureen dhallinyaro ka mid ah wadayaasha gaadiidka loo yaqaano BAJAAJKA.
Sidaan oo kale Magaalada Muqdisho Xiligii beegsiga wariyaasha ku soo bateen waxaa xusid mudan in Wariye Max'ed Cumar Bakay" oo xiligi wariyaasha lagu dhameeyn jiray Magaalada Muqdisho soo Xirtay Funanad ay ku Qoran Tahay War Hooy intaa I Togan I wareyso" taaso noqotay hadal heynta ugu badan Bulshada xiligaasi.
Sidoo kale Wasaaradda Amniga ayaa sidaan ugu hadashay hadalada la isla dhex maraayo Haddaba annaga oo gudaneyna waajibaadka naga saaran ilaalinta sharafta iyo karaamada shacbga Soomaaliyeed iyo sumcadda gabdhaha waxaan u xaqiijineynaa in aanan ka oggolaan doonin ficillada ay ku kacayaan wiilasha wadayaasha ka ah gaadiidkaas si ay wax u yeelaan magaca gabdhaha Soomaaliyeed.
Hadaba warka soo baxay Wasaaradda Amniga ayaa u muuqdo mid loogu hanjabaayo Bajaajleyda dhacoodiyinkaasi lakulmay kadibna dibad baxyo cabasho ah Magaalada Muqdisho ka dhigay.
Gaari ku qarxay Muqdisho xog laga helayo qasaaraha